ULebusa ngeke anqabe uma enikwa ibhande kwiBafana Bafana - Impempe
ULebusa ngeke anqabe uma enikwa ibhande kwiBafana Bafana
Umdlali wasemuva weMamelodi Sundowns, uMosa Lebusa uluphathe ngesinono ibhande lokukaputeni elifike kuye ngenxa yokuthi uHlompho Kekana ubengadlali njalo, kanti uRicardo Nascimento ubelimele ngaleso sikhathi.
Indlela adlala kahle ngayo lo mdlali owakhiqizwa yinkulisa ye-Ajax Cape Town isimenze omunye wabadlali okubhekwe ukuba bahole iBafana Bafana. Iqembu lesizwe linomdlalo wobungani ne-Uganda ngesonto elizayo kanti uThulani Hlatshwayo akaqokwanga esikwatini.
Nokho akuthusanga ukusala ngaphandle kukaTyson kwazise ajabanga nesizini enhle kwi-Orlando Pirates yize efike wanikwa lona ibhande. Kubadlali abaqokiwe, nguLebusa noRonwen Williams weSuperSport United kuphela abangokaputeni emaqenjini abo.
“Uma lingavela ithuba, ngeke ngibe nenkinga nalo. Kodwa njengamanje ngikholwa wukuthi kunabadlali eqenjini lesizwe asebenesikhathi eside kunami engicabanga ukuthi bakufanele ukuhola iqembu,” kusho uLebusa ekhuluma nabeSAfm kuleli viki.
“Kodwa uma umqeqeshi engibona ngifanelwe wukuhola iqembu, ngeke ngenqabe.
“Okwamanje nokho ngizokwamukela akushoyo,” kucacisa lo mdlali. ULebusa ungomunye wabaqokelwe indondo yeSitobha soNyaka emiklomelweni yePSL yokuvaka isizini.
“Kimi kufana nebhonasi. Ngasekuqaleni kwesizini bengingadlali. Ukuqokwa kwami kungithusile. UThemba (Zwane) uke wangitshela ukuthi uma ngiqhubeka kanje, ngizoqokwa. Ngavele ngamziba, kodwa manje sekwenzekile,” kusho uLebusa.
Uthe iSudnowns isebenzile yize iqede nesicoco seligi kuphela kwazise ishonelwe ngabadlali bayo ababili ngasekuqaleni. U-Anele Ngcongca washona ngemuva kwengozi yemoto. Yize wayeseyosayina kuMaZulu FC ngaleso sikhathi, kodwa wayesesemabhukwini eMasandawana.
NoMotjeka Madisha washona ngemuva kokuba sengozini yemoto eMidrand. Lezi zinto zabathikameza kakhulu emoyeni abadlali beSundowns. Kodwa uLebusa uthi kwadingeka baqinise imihlathi baye phambili.
“Uma ubheka ushintsho olwenzekile eqenjini, sisebenze kahle kakhulu. Asizange sishaywe ekuhambeni isizini yonke. Besifisa ukwenza kangcono kulaokhu. Kodwa lokhu esikuzuzile kuhle.”
Previous Previous post: AmaZulu nethuba lokubuyisa izinduku ayishovele ehlathini iMaritzburg
Next Next post: Zijikile izinto, iChiefs yangena nezicabha kwiTop 8